Vanhu Vakawanda Vochema Zvikuru neKukwira kweMitengo yeZvinhu
SHURUGWI, MIDLANDS —
Vanhu vakawanda munyika vanoti havasi kufara nekukwira kurri kuita mitengo yezvinhu iyo iri kugara yakaita chamurambamhuru ichikwira.
Vanhu ava vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu kuri kuita kuti vaomerwe nehupenyu panguva iyo nyika yakavharwa nekuda kwechirwere cheCoronavirus, uye vazhinji vavo vanoita mabasa emaoko vasina chouviri chavari kuwana panguva ino.
Vanhu vakawanda munyika vari kugunun’una zvikuru nekukwira kwemitengo yezvinhu zvakakosha mukurarama kwavo mazuva ose, panguva iyo huremu hwemari yemunyika huri kuramba huchienda kumawere.
Mumwe mugari wekuShurugwi mudunhu reMidlands, Amai Mercy Pazvakavambwa, vanoti munzvimbo yavanogara hakuna chiri kutengeka sezvo vezvitoro vari kukwidza mitengo yezvinhu pamadiro aJojina.
Amai Pazvakavambwa vanoti marita maviri emafuta ekubikisa avaitenga nemadhora makumi mapfumbamwe nyika ichangovharwa, ave kuita madhora zana nemakumi matatu, ukuwo makirogiramu maviri eshuga, achidaidzira zana nemakumi maviri emadhora emari yemunyika.
Mumwe mugari wekwaFurusa kuShurugwi kwekare, VaGrayham Gabi, vanotiwo marita maviri emafuta ekubikisa ari kutengwa nemadhora zana nemakumi mashanu munzvimbo yavanogara.
VaGabi vanoti vari kushamiswa zvikuru nekukwira kwemitengo panguva iyo huremu hwedhora rekuAmerica, hwakagadzikana zvikuru.
Mutungamiriri weConfederation of Zimbabwe Retailers Association, VaDenford Mutashu, vanoti ichokwadi kuti mitengo yezvinhu muzvitoro iri kukwira zvakanyanya kubva panguva yavharwa nyika mwedzi wapera.
Asi VaMutashu vanoti vezvitoro vari kuita izvi nekuda kwehunjire, sezvo zvisiri pamutemo zvavari kuita zvekukwidza mitengo yezvinhu.
VaMutashu vanoti mukuedza kugadzirisa dambudziko iri, sangano ravo riri kushanda nehurumende kuitira kuti kuvhurwe zvitoro zvakawanda zvinotengesa zvekudya, kusanganisira zvidiki, sezvo zvimwe zvitoro zviri kutora mukana wekuvhurwa zviri zvishoma, zvichibva zvakwidza mitengo yezvinhu, sezvo vanhu vanenge vasina kumwe kwekunozvitenga.
Asi imwe nyanzvi munyaya dzehupfumi, uye vari munyori wezvehupfumi muMDC inotungamirwa naVaNelson Chamisa, VaTapiwa Mashakada, vanoti vanofungidzira kuti kukwidzwa kwemitengo uku kunogona kukonzerwa nezviri kufungidzirwa neveruzhinji kuti mushure mechirwere cheCOVID-19, munyika munogona kuita dambudziko rekushomeka kwezvinhu.
Asi VaMashakada vanoti izvi zviri kuitwa nekuda kwemakaro.
Mushandi mukuru anoona nezvekubuditsa kwemashoko mubato reZanu PF, VaTafadzwa Mugwadi, vanoti vemabhizinisi makuru kana madiki, havafanirwe kufunga zvekuita mari yakawanda vachishandisa mukana wekuvharwa kwenyika, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCorinavirus, icho chauraya vanhu vakawanda pasi rose.
Hatina kukwanisa kunzwa divi rehurumende panyaya iyi sezvo gurukota rinoona nezvekutengeserana, Amai Sekai Nzenza, vanga vasiri kudavira nharembozha yavo.
Asi mutungamiriri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vakayambira vemabhizimusi kuti vasatora mukana wekuvharwa kwenyika vachikwidza mitengo yezvinhu zvisina tsarukano, vakati mitemo yenyika ichabata vese vanoita zvisiri pamutemo.
Zimbabwe, sedzimwe nyika pasi rose, kunyange hazvo dziine nguva dzakasiyana dzekuvharwa, yakavharwa kwemazuva makumi maviri nerimwe, senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere cheCorinavirus, icho chakatanga kuChina gore rapera.